Egosipụta Fiat Concept Centoventi na CES 2020! | RayHaber | raillynews
[17 / 01 / 2020] 3 E hiwere isi ụlọ ọrụ ọhụrụ na Ministry of Transport	06 Ankara
HomeỤWAAmerica1 AmericaEgosipụta Fiat Concept Centoventi na CES 2020!
10 / 01 / 2020 1 America, America, ỤWA, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, akpakanamde
N’ebe a na-ere ihe elektrọniki - CES 2020, Fiat gosipụtara echiche ọhụrụ na echiche ọkụ eletrik Fiat Concept Centoventi. Cargbọ ahụ echiche “Centoventi gören, nke dọtara nnukwu mmasị na CES 2020, ụlọ ahịa elektrọnik ahịa kachasị ukwuu n'ụwa a na-eme na Las Vegas, na-akwadebe inye azịza pụrụ iche maka mkpa nke agagharị eletrik. Centoventi Concept, bụ nke ewepụtara maka afọ iri nke Fiat nke bu ụzọ gosipụta ya na 120th Geneva Motor Show, na-anọchite isi ihe kachasị ọhụrụ nke akụkọ ihe ochie ahụ na njikwa ya na gburugburu ya.
Fiat gosipụtara Concept Centoventi na Consumer Electronics Show - CES 2020 na Las Vegas, USA. Centoventi, ihe nlere nke Red Dot na-enweta mmeri nke Fiat Chrysler Automobiles (FCA), nke na-ejikọ teknụzụ ụgbọ ala eletrik na azịza nhazi, na-egosipụta ọhụụ nke ụgbọ njem eletriki; O mere ka ndị ọbịa mara banyere ya, ya na ihe ya na teknụzụ ya. Ebumnuche ahụ, nke na-ewere aha ya na okwu Centoventi, nke pụtara yüz otu narị na iri ada na Italiantali, na-akwado ịnye ahụmịhe na-akparaghị ókè na ịhazi onwe gị, ma na-eburu ihe ọmụma na ahụmịhe nke ika ahụ site n'oge gara aga nke afọ 120 ruo n'ọdịnihu.
“Na Centoventi“ Ndopụta ”ga-agbanwe okwu ahụ”
Site na ngosipụta ya na CES 2020, a ga-emepụta Fiat Concept Centoventi, nke egosipụtara na nke mbụ n'ahịa North America n'ụzọ dị otú ahụ na enwere ike ịhazi ya kpamkpam na ụtọ na mkpa nke onye ọrụ ahụ n'enweghị nsogbu nrụpụta ọ bụla. Iji mee ka usoro mmepụta dị mfe, a na-ezube ịmepụta ụgbọ ala n'otu ụdị naanị na otu agba. Site na iji '4U' mmemme, onye ọrụ njedebe nwere ike ịhazi ụgbọ ala nwere ụdị ụlọ elu 4 dị iche iche, mgbanye ọkụ dị iche iche 4, rim dị iche iche na 4 nhọrọ dị iche iche dị na mpụga. Gbọ ala dịka ngwaọrụ nke ọgbara ọhụrụ; Site na agba ya na mpụga, ime ụlọ, nke mbughari na mgbakwunye ụlọ, a na-ahazi sistemụ infotainment kpamkpam. Fiat Centoventi ekwesighi ichere maka mmelite dịka ụdị ọhụụ, usoro pụrụ iche ma ọ bụ etemeete. Ọ bụrụ na achọrọ ya, onye ọrụ ahụ nwere ike iwelite ụgbọ ya n'oge ọ bụla site na ịme mgbanwe achọrọ. Fiat Centoventi dị modul. Site na usoro nrụpụta batrị ohuru, oke ụgbọala nwere ike ịdị 4 kilomita ruo 100 dabere na ebumnuche ịchọrọ.
Nkọwa Kişisel na nkọwa niile ”
Nkwekọrịta Centoventi na-eweta usoro ọhụụ na ụwa nke ụgbọala, nke dị na ntughari na ngwọta ọkụ eletrik, dịka ọ bụ na 500s, mgbe Fiat duuru usoro mmepụta ihe na ọdịbendị ya na ihe atụ 1950, yana njirimara mgbagha. A gbanwere ya ka ọ bụrụ ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ọgbara ọhụrụ nke etinyere n’elu ọdụ ahụ ma kaa akara ọzọ dị ịrịba ama na ngalaba ụgbọala. Ezubere site na ịkekọrịta ụgbọ ala na ụdị ụgbọ njem ọhụụ n'obodo, echiche a na-egosipụta enyo na ọkpọ mmiri na-eche ihu ihu windshield. Ihe ngosi nwere ike igosiputa ozi dika ‘ihe zuru ezu, ihe nzuzu ma obu ebe anaghi akwụ ụgwọ’. Na mgbakwunye, nnukwu ihuenyo dị na ọdụ ọdụ ahụ na-enye onye ọrụ ohere ịkekọrịta ozi ya na ụwa mpụga. Mgbe ụgbọ ahụ na-agagharị, ọ bụ naanị akara ngosi Fiat ka egosiri, ma mgbe ọ kwụsịrị, onye ọkwọ ụgbọala nwere ike gbanwee na ọnọdụ “ozi” iji mepụta ozi ọhụrụ.
Ahịa Ahịa eletrik
Akşener'den Kanal Istanbul Na-ekwu: 'Nke a bụ Ihe Nkuzi Maka Ndị nkuzi nke Istanbul'
Gaziantep Nizip ụgbọ ala ịmalite
3 E hiwere isi ụlọ ọrụ ọhụrụ na Ministry of Transport
Kanal İstanbul kwadoro maka EIA Report